Mhinduro kudambudziko mukumisikidzwa kweMacOS Sierra: "iko kusimbiswa kwesiginicha yemubhadharo weiye wekumisikidza hakugone kuitwa" | Ndinobva mac
Mhinduro kudambudziko mukumisikidzwa kweMacOS Sierra: "iko kuongororwa kwesiginicha yeiyo yekuisa payload hakugone kuitwa"
Unoenda gadza Sierra kubva pakutanga uye uyu ndiwo mutsara unovhura kuiswa kweiyo nyowani macOS Sierra kune vashandisi vakasiyana mushure mekuita yakachena kuisirwa. Iko kukanganisa iko kwainokanda kwakajairika kupfuura isu zvatinofunga uye vazhinji venyu muri kutiudza kuti meseji inoonekwa: "Yakundikana kuongorora siginecha yemutero wekubhadhara" mushure mekuiswa. Nhasi tiri kuzopa mhinduro kudambudziko risinganzwisisike risingashandisi vese vashandisi vanoisa kubva pakutanga iyo nyowani sisitimu yekushandisa yakatangwa munaGunyana 20 naApple uye zvakakanganisa kuneta mudiwa Luis, uye akatipa mhinduro kuchinetso.
Zvinoita kunge chikonzero nei siginecha cheki iri kutadza imhaka yekuti zuva racho harina kunaka. Mune ino kesi, mhinduro yedambudziko kuita aya matanho muTerminal uye iri nyore kwazvo kupfuura zvaingaite. Mune ino kesi kana tine internet yekubatanidza Isu tinovhura Terminal uye tinyore uyu murairo:
ntpdate -u nguva.apple.com
Kana wapedza Tichaona kuti iyo nguva nezuva zviripo zvinoonekwa muTerminal zvichibvumira kuenderera mberi negadziriro yekumisikidza mac mac Sierra hapana dambudziko.
Gadza bhuku remazuva nenguva
Munyaya ye vashandisi vasina network yekubatanidza, iwo wekutanga kuraira unovapa iko kukanganisa kana kungoda kumisikidza razvino zuva uye nguva nemaoko, iwe unofanirwa kutevedzera anotevera matanho. Isu tinotaipa "Zuva" mune chinongedzo kuti uone chakanyanya kushata uye tobva tanyora seizvi: (mwedzi) (zuva) (awa) (maminitsi) (gore)
Zvinoshamisa kuti havazi vese vashandisi vakave nedambudziko, asi ichokwadi kuti huwandu hwakanaka hwevashandisi hwakakanganiswa uye zvinoita sekunge zvine chekuita nemuchina pachawo. Chokwadi ndechekuti iyi yekugadza bug yakaonekwawo mushanduro dzakapfuura dzeOS X uye mhinduro inoenda kuburikidza nenguva ino uye nezuva shanduko muTerminal.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Mhinduro kudambudziko mukumisikidzwa kweMacOS Sierra: "iko kuongororwa kwesiginicha yeiyo yekuisa payload hakugone kuitwa"
Mhoroi, zvakanaka, ini ndaedza uye zvinondipa kukanganisa, sezviri pachena iyo system haibvumidze nguva yekuchinja
tsigira musayendisiti wemakomputa akadaro
Mhoro, ndatenda nemupiro wako. Chaizvoizvo mhinduro iyi inoshanda kune dzekare vhezheni dzeOS X, mune yangu dambudziko rinoramba riripo uye ndinofunga iro dambudziko ndiko kuenda diski. Ini ndaita yakachena kuisa kubva kuUSB kuenda kuHDD pasina matambudziko. Panzvimbo iyoyo, pandinoita zvakafanana kune SSD inondipa iko kukanganisa. Mune yangu iri MacBook Pro kubva 2010. Ini ndinoramba ndichiongorora. Ndiri kuita bvunzo izvozvi neSuperduper ichibatanidza iyo HDD disk kune iyo SSD, ini ndichakuudza.
daniel feb akadaro
Bvunzo dzakafamba sei? Ndine mac mini ine dambudziko iro uye neiyo imwechete SSD. Iyo yekuchinja nguva haina kugadzirisa iko kukanganisa. Zvinoita here kukanganisa disc? Ini ndatozvimisa neDisk Utility
Pindura kuna daniel febres
sudo su mune chinouraya
uye wako mushandisi apfuura uye ndizvozvo
Ini ndinowanawo iko kukanganisa uye zvisinei nekuti zuva racho rinoshanduka zvakadii, ndinoramba ndichiwana iko kukanganisa, ini ndinogadzirisa dhisiki uye ndichiri mumwe chete …… handizive zvekuita zvekare.
Zvinoitika kwandiri zvakafanana nemukomana uyu….
Miguel de la Fuente (@miguelfcaba) akadaro
Jordi, warasikirwa nekuvimbika kwese. Handizovimba nezano rako zvakare, wakaomesera hupenyu hwevanhu vazhinji, kusanganisira ini.
Pindura kuna Miguel de la Fuente (@miguelfcaba)
Mhoro Miguel, ini handinzwisise zvaunoreva nekutaura kwako asi ini handimanikidzi hupenyu hwemunhu nekuti ini handimanikidzi chero munhu kuti aite chero chinhu. Isu tiri pano kuzobatsira uye kugovana ruzivo uye ruzivo, hapana chimwezve.
Ini handiwanzo kupindura kumashoko akadai seizvi kuti ndisapinda munharo pamusoro pazvo. Chero zvazvingava, ndinokumbira ruregerero.
Ini handina kusevha iko kukanganisa asi ini ndakaita pane yangu hama yemac uye neizvi ndakakwanisa kuzvigadzirisa saka ndinokutendai zvikuru nezvazvo
Pindura kuna Aimar
Roberto Chagoya akadaro
Ndatenda Jordi Giménez, pachezvangu akandigadzirisira dambudziko, ini ndaigona kuisa MacOS Sierra pasina dambudziko rakadai, kungoita shanduko yezuva remanyorerwo ndakagadzirira "zuva" pasina makotesheni kunhamba nekuti pasina murairo haichinje.
Pindura kuna Roberto Chagoya
Support Centre akadaro
1. Ini ndinofanira kutaura kuti uyu murairo unoshanda chaizvo kune dzakapfuura shanduro dze os paMac uye kuti chete nekutaipa mune terminal (kana kuisa) zuva rinoteverwa nenzvimbo 1006013616 (kutora sereferenzi mwedzi, zuva, awa, maminetsi, uye maviri ekupedzisira manhamba egore; mune ino kesi Gumiguru 6 na1: 36 yegore 2016) ichiteverwa neinopinda, iro zuva rinovandudzwa pasina dambudziko rakawanda, zvobva zvasiya "date 1006013616" (isina makotesheni emazwi).
2. Uye izvo kune avo vasingamire kuwana iwo meseji kunyangwe kugadzirisa iwo musi, zvinoita sekunge MacOS Sierra yakanyanya kunetseka kupfuura zvinoita sekukanganisa (sekusimbisa kwandakaita) iko shanduko yebhazi re flexor yeiyo hdd muMacBook neMacBook Pro idzo dzinadzo kubva muna2009 kusvika 2013 (dzese simbi, kwete chena, kwete nyota yenyota) kana vachichinja mushonga unoyera kukanganisa hakubudi zvakare uye vanogona kuisa zvakajairika uye sezvandataura zvinotsvaga kumwe kukuvara mune iyo flexor yakagadzirira, iwe unoshandura iwe kumisikidza uye ramba uchinakidzwa neMac, ndinovimba rubatsiro.
3. Ndiani ane mhinduro yekudhonza x-simba kutsemuka paMac sezvo isingaivhure uye ini ndoda kuisa adobe, autocad, pakati pevamwe vanoshandisa kutsemuka uku, ndinovimba mhinduro uye kwaziso!
Pindura kuSupport Center
iyo monkey-ndiani-anoseka akadaro
Kutenda neichi posvo! Waponesa dhongi rangu! Uye ichokwadi kuti iwe unofanirwa kuisa "date" pamberi chaipo pacho.
Zvakanaka, ini ndinowana izvi: date: bind: Mvumo yaramba
zuva: settimeofday (nguva): Kushanda hakubvumirwe zuva
uye hazviite kuti ndichinje zuva chero chero chirevo kubva kune mumwe munhu anoziva nezvazvo
Chipo chakadii mupiro, ini ndine ma disc maviri mukomputa uye neizvi ndakakwanisa kugadzirisa dambudziko! kutenda kuzhinji!
Armindo Quintas akadaro
Ndiri kuita dambudziko rekuisa Mac iyo saw, iyo yekubhadhara.
Ndinoda rubatsiro rwako kugadzirisa ndapota
Pindura Armindo Quintas
Zvakaitika kwandiri neShumba yeMakomo uye ikozvino neiyo sierra, ndinofunga nyaya irimo mukumisikidza zuva padhuze nekuvhurwa kweOsi kwandiri ndakaisa 070820162016 uye neizvozvo rakashanda mushure mekuyedza kwakawanda kuisa zuva ranhasi
Ndatenda zvikuru neruzivo! Zvave zvichindibatsira kwazvo uye ini ndakakwanisa kuita kumisikidza kwakakwana!
Makorokoto pachinyorwa !!!
Pindura kuna Leric
Corelio, wagona, ndinokutendai zvikuru neruzivo rwenyu ... Ndakawanawo kukanganisa uye hazvina kunditendera kuti ndipinde muzuva saka ndakaita chinhu chenyu kuisa zuva rekuvhara uye kwete razvino, chete izvo mu iyo Terminal haina kunditendera kuti ndiite uye ini ndakavhura ndakananga muSystem Preferences yeMacbook Pro yangu uye ini ndakatsvaga iyo Zuva neNguva icon (iyo Clock kudhirowa, kune avo vachiri kubata Mac zvakanaka) uye ini ndakapinda ipapo ndichichinja nemaoko ... Chekutanga ndakaenda kuzasi kuruboshwe ndikabaya kaviri Padlock Kuti ndivhure uye nditendere kuti ndigadzirise uye ini ndakaisa password yangu uye yakavhurwa, ipapo ndakabvisa cheki kana popcorn sezvavanowanzo daidza imwe neimwe imwe munyika yavo ... Ndakatsvaga zuva rako musi waChikunguru 8, 2016 uye iyo nguva yandakaisa pa17: 15 uye NDAGADZIRA! Ini ndakatanga kuisa pasina chero kukanganisa!. Nhasi ndinogona kushandisa iyo Sierra Inoshanda Sisitimu pasina matambudziko (^ _ ^) v… .. Ndinovimba inogona kukubatsira mune chimwe chinhu senge ini ndaishuvirawo kutsvaga mhinduro uye ndakapedzisira ndarega kuisa ino inoshanda system.
Mhoro kwandiri, iko kukanganisa kumwe chete kunoramba kuchiitika kwandiri, ini ndatochinja mameseji zuva uye ini ndashandisa iro ra2016 sezvakataurwa naCorelio, asi zvichiri kuitika kwandiri. Komputa yangu iMac uye ini ndakaita fomati kubva pakutanga neangu Bootable USB uye iyo sierra yakadzvanywa kubva kuAppStore, pane chero munhu ane imwe mhinduro yekugadzirisa dambudziko? 🙁 Rubatsiro! : '(
Zuva rakatevera ndakakwanisa kugadzirisa iko kukanganisa, kune avo vese vanoramba vachisangana nedambudziko rekuti "hazvaigona kuitwa ..." kunyangwe nekuchinja mazuva. Mhinduro yangu yaive yekugadzira nyowani bootable USB kubva kune terminal kodhi uye kwete neDiskMaker ... iyo kodhi chimwe chinhu senge. sudo / Applications / Install \_ macOS \_ Sierra.app/Contents/Resource/createinstallmedia –volume / Volumes / Untitled –applicationpath / Applications / Install \_ macOS \_ Sierra.app, inzira yekushandisa kugadzira bootable. Iko kune vhidhiyo pane youtube yekutevera nhanho nhanho uye haina kuoma, iyo diskmaker yaindikonzera dambudziko rakawanda. Asi ini ndakadhonza kekupedzisira nenzira iyi, kudzoreredzwa uye zvese zvakashanda zvakanaka. 🙂
Hector Ayala akadaro
Mhinduro uye mhinduro yakakwana. Izvo zvakakodzera kutaura kuti pamberi pehuwandu, ine iyo ngano: zuva uyezve manhamba. Semuenzaniso: zuva # # # # # # # # # (gumi nhamba)
Pindura Hector Ayala
Hapana imwe yemaitiro yakandishandira: Ndakaedza akawanda pendrives, ndikagadzira mifananidzo ine intsall disk dhizaina, diskmanager, terminal, ndachinja iyo nguva mune iyo terminal (ini ndaive nenguva yakanaka asi yeAmerican nguva zone) uye hapana kana zvachose, nguva dzose iko kukanganisa. 🙁
Pindura kune alifunk
Hi Ali, ini ndakafanana newe, wakawana mhinduro here? Ndine MacBook Pro yangu ya2012, kwaziso.
Aldair Morales Saldarriaga akadaro
Mhoroi makadii, ini ndine chikanganiso ichi pandinoda kuisa Mac OS sierra paMacBook Pro kubva muna 2011 ine ssd disk, ndakatoedza mazuva ese mushure uye pamberi peiyo OS vhezheni, tmb ndakaedza kuisa iyo data nemaoko, iyo kukanganisa ini inongobuda kana yave kuda kupedzisa kuisa zvese, ngatitii mu 99.9% ini ndinowana iyo payload kukanganisa, chero imwe nzira yekugadzirisa iko kukanganisa?
Pindura kuna Aldair Morales Saldarriaga
Wakakwanisa kugadzirisa dambudziko racho here? Izvo chaizvo zvakafanana zviri kuitika kwandiri neMacBookPro Mid 2010 7.1 kana ndichiedza kuisa iyo Sierra: Ndakaedza iyo zuva, rakasiyana usb, zvese neDisk dhizaina uye diskmaker, kugadzira bhuku reusb nekunyora mutemo Sudo mune terminal. Navo vese, kukanganisa kwekubhadhara kunodzoka kana paine isingasviki miniti yekuisirwa.
Pane chero munhu anoziva kuti ndinogona kuzviita sei?
Ndinokutendai zvikuru zvakashanda zvakakwana neangu SSD nyowani. Macbook yangu iri kubva muna 2011 uye zvese zvakanaka nemhinduro
Mushure mekuedza zvese, Al fiiiiiiiiiiiiiinn !!! Ini ndakakwanisa kuisa Mac Sierra. Ndakazviita nenzira iyi
1. Sezvo ini ndaive ndakamomisa diski uye ndisina kana sisitimu yekushandisa, ndakadzoreredza sisitimu yekushandisa iyo inouya kubva kufekitori pane yangu MacBook (mune yangu Yosemite) ndichishandisa iyo Internet Kudzorera sarudzo (Cmd + R)
2. Kamwe yaiswa kudhawunirodha Sierra zvakare asi ikozvino neCable uye usingashandisi Wi fi (zvakare rega iyo app ichengetedze kugadzirisa sarudzo dzekuchengetedza kana izvo zvayakakurudzira.)
3. Tarisa kana kurodha pasi kwaitwa nemazvo uye pasina kukundikana uchishandisa kodhi Sha1 nenzira iyi.
- Ita mukati meiyo terminal: shasum /Applications/Install*OS*.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
- Mirira maminetsi mashoma kuti mhedzisiro ioneke
- Mhedzisiro yacho inofanira kuve iyi (kana iwe wakadhirowa sierra 10.12.5): 51df126965433187403987c9d74d95c26cba9266
Asi pane ino webhusaiti pane tafura ine mhedzisiro inofanirwa kuoneka zvinoenderana neshanduro inoshandiswa https://github.com/notpeter/apple-installer-checksums
4. Zvino ini ndakagadzira yangu USB bhutsu ndichishandisa iyo terminal (mune yekutsvaga injini iwe unogona kuwana tutorials). Kana chirongwa ichi chapera, iniwo ndakaita cheki kana ndanyatso kuendesa iyo faira kuUSB ndichishandisa Diff kodhi mune iyo terminal. (izvo zvinogona kuwanikwa muinjini yekutsvaga zviri nyore) ndeyeZVINODA.
5. Maitiro andaida kubvisa kusahadzika kuti kana kugadzirisa kungagone kuiswa nemazvo kana zvakare kuve nekanganiso usati wapedza kuisirwa. Ndakaedza KUDZIDZISA Osx Yosemite wangu kuSierra ndichishandisa iyo yekumisikidza (hapana usb) uye zvakandishamisa, yakaiswa nenzira kwayo, hapana mhosho yakaonekwa
Izvo zvakandiratidza kuti ini ndaigona kuisa Osx Sierra kubva pakutanga. (Zvaive zvandaida chaizvo).
Saka ndakaedza kuisa kubva pakutanga (pasina kugadzirisa iro zuva kana chero chinhu). Uye sekutaura kwandaita, yaive yakaiswa nenzira kwayo uye handina kuzowana iwo meseji inotyisa. 😀 Iye zvino ndirikunakidzwa neSIerra 🙂
Ndinovimba zvinobatsira 😀
Robert Castillo akadaro
Dambudziko nderekuti vanoisa zuva remwedzi panzvimbo uye haifanire kutanga saizvozvo, uyezve mufananidzo uri mumufananidzo wakanaka, ndiko chete kukanganisa.
Chimwe chinhu usati watanga kunyora chinofanira kutanga neshoko rekuti zuva rinoteverwa nenhamba, iwe unofanirwa kuona chete gumi manhamba kwete kuti riite.
Ndinovimba zvinobatsira zvikuru, Mwari vakuropafadzei
Pindura kuna Robert Castillo
Pedro Gonzalez akadaro
Ini ndakachinja bhatiri remac yangu uye pandakaedza kuisa sierra yakandipa iko kukanganisa.
Iine "zuva 0901123017" rakagadziriswa.
Kutenda kwazvo !!!
Pindura Pedro González
Mhoroi, ndine 2014 Mac Book Mhepo uye nezuro husiku zvakatora maminetsi makumi maviri nemaviri kupedzisa kuisirwa OS OS. Chokwadi ndechekuti ndaifanira kudzikisa muvharo nekuti ndaifanira kuenda kunhandare. Iye zvino hazvitangi. Ndakaipa cmd + alt + kudzima uye pandinoibatidza pane icon yefaira ine mucherechedzo wemubvunzo unoonekwa uchipenya mukati. Chero ani ane chero zano zvandingaite? Ndatenda!
Zvakandishandira kudzoreredza High Sierra, yakanaka kwazvo mupiro ndatenda
Mashandisiro ekushandisa iyo nyowani Kudzora Center muIOS 10 (I)
Chizvarwa chekutanga Apple Watch uye Series 1 hazvina kufanana